Akhriso wararkii ugu dambeeyey ONLF & Itoobiya oo qarka u saaran inay kala saxiixdaan Heshiis Taariikhi ah - Caasimada Online
Home Warar Akhriso wararkii ugu dambeeyey ONLF & Itoobiya oo qarka u saaran inay...
Akhriso wararkii ugu dambeeyey ONLF & Itoobiya oo qarka u saaran inay kala saxiixdaan Heshiis Taariikhi ah
Nairobi (Caasimadda Online) – Waxaa maalintii seddexaad galay wadahadaladda magaalada Nairobi uga furmay jabhadda ONLF iyo Dowladda Itoobiya, kaasoo ay dhexdhexaadineyso Kenya.
Wada-xaajoodka oo u socda qarsoodi aan saxaafadda loo ogolaan yaa Afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge wuxuu sheegay inay wadahadalada ay si wanaagsan ku socdaan, lagana soo saari doono war-saxaafadeed.
Ma ahan markii koowaad oo ay wadahadlaan Itoobiyo iyo ONLF, laakiin waxa ay u egtahay in kuwan ay aad uga miisaan culusyihiin kuwii hore. Afhayeenka ONLF ayaa yiri: “Barnaamijka siyaasiga ah ee ONLF ayuu ku xusan yahay in khilaafka Ogaadeeniya iyo Itoobiya lagu xaliyo hab wadahadal ah, mana ahan markii ugu horeysay, 1989-kii ayaan wadahadalnay, 1990-kiibaan wadahadalnay”.
Dhammaan wadahadaladaasi waxa ay ku dhammaadeen guuldarro, balse xaqiiqda ah inay hadda isa soo hor fariisteen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas’uuliyiinta wasaaradda gaashaandhiga Itoobiya oo dhinac ah iyo waftiga ONLF oo dhinaca kale ah ayaa wadahadalan ka dhigaya kuwa dad badan ay ka filayaan natiijo wanaagsan.
Taageerayaasha jabhadda iyo kuwa kale ayaa baraha bulshada kusoo qoray in horumar laga gaaray shirka, isla markaasma ay u muuqato in heshiis kama dambeys ah la’isla fahmi doono.